Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Teknolojia tamin’ny Marsa 2012
Teknolojia · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Marsa, 2012
Nihaniroborobo fampiasam-bahoaka ny fampitam-baovao an-tserasera nandritra ny revolisiona toniziana tamin'ny fiandohan'ny Janoary 2011. Ankehitriny miezaka ny hitazona ny fanatrehany an-tserasera ny mpiserasera ny ny mpanao politika hahazoany mpihaino hanatrarany ny tanjony. Mitondra antsika ambadiky ny sehatra i Ahmed Medien.
Mpanoratra Eddie Avila · Afrika Mainty
Miely manerana ny lemaka maina ahitana Baobaba mitsitokotoko etsy sy ery ny tanàna ambanivohitr'i Ségou. Ity faritra ao Mali ity dia miavaka amin'ny fisian'ireo mponina tambanivohitra mivelona amin'ny karazam-pambolena, sy ny fiompiana ary ny kivarobarotra. Eo ho eo amin'ny adiny efatra miala ny renivohitra Bamako no misy ny faritra Ségou, ary...
Mpanoratra Katrin Zinoun · Eoropa Andrefana
07 Marsa 2012
03 Marsa 2012
Mpanoratra Samy Boutayeb · Alemaina